အင်္ဂလန်အသင်းရယ့် ဘယ်နောက်ခံလူနေရာကို ဘယ်သူက ပိုပြီး ထိုက်တန်သလဲ? – Sport Gaber
အင်္ဂလန်အသင်းရယ့် ဘယ်နောက်ခံလူနေရာကို ဘယ်သူက ပိုပြီး ထိုက်တန်သလဲ?
အင်္ဂလန်ရယ့် ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာတော့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားနှစ်ယောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ ယူနိုက်တက် ကြယ်ပွင့် လုခ်ရှောနဲ့ ချဲလ်ဆီးနောက်ခံလူ ချီဝဲလ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားနှစ်ဦးလုံးအတွက် ဒီနှစ်ရာသီဟာ ပြင်းထန်ခဲ့ပြီး နိုင်ပွဲတွေမှာ သူတို့ရယ့် စွမ်းဆောင်ရည်တွေကြောင့်ပါ၀င်ပါတယ်။ ချီဝဲလ်ကတော့ ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့ အတူ ချန်ပီရန်လိဒ်ဖလား ရယူထားသူပါ။ လုခ်ရှောကတော့ ယူနိုက်တက်အတွက် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး သွင်းဂိုး ခြောက်ဂိုးလောက်ထိ တိုက်ရိုက်ပါ၀င်ပတ်သတ်မှုရှိပြီး ဂိုးဖန်တီးမှုလည်း ရှစ်ကြိမ်ထိရှိပါတယ်။
အင်္ဂလန်အသင်းသားဟောင်း စီနီယာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝိန်းဘဒစ်ကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကိုရွေးရလျှင် တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါအားကောင်းပြီး ခံစစ်မှာလည်း ပြောစရာမလိုတဲ့ လုခ်ရှောဟာ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးလို့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဝိန်းဘဒစ်ကတော့ ချဲလ်ဆီး၊ မန်စီးတီးကဲ့သို့သော အသင်ကြီးတွေမှာ ပါ၀င်ကစားဖူးတဲ့ ကစားသမားဟောင်းကြီးပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အင်္ဂလန်နည်းပြ ဆောက်ဂိတ်ရယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်သာ မူတည်ပြီး ဘယ်သူ့ကို ပွဲထွက်ခွင့်ပေးသွားမလား စောင့်ကြည့်ရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အငျ်ဂလနျရယ့ျ ဘယျနောကျခံလူနရောမှာတော့ အကောငျးဆုံး ကစားသမားနှဈယောကျရှိနခေဲ့ပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးကတော့ ယူနိုကျတကျ ကွယျပှင့ျ လုချရှောနဲ့ ခြဲလျဆီးနောကျခံလူ ခြီဝဲလျ တို့ဖွဈပါတယျ။ ကစားသမားနှဈဦးလုံးအတှကျ ဒီနှဈရာသီဟာ ပွငျးထနျခဲ့ပွီး နိုငျပှဲတှမှော သူတို့ရယ့ျ စှမျးဆောငျရညျတှကွေောင့ျပါဝငျပါတယျ။ ခြီဝဲလျကတော့ ခြဲလျဆီးအသငျးနဲ့ အတူ ခနြျပီရနျလိဒျဖလား ရယူထားသူပါ။ လုချရှောကတော့ ယူနိုကျတကျအတှကျ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျခဲ့ပွီး သှငျးဂိုး ခွောကျဂိုးလောကျထိ တိုကျရိုကျပါဝငျပတျသတျမှုရှိပွီး ဂိုးဖနျတီးမှုလညျး ရှဈကွိမျထိရှိပါတယျ။
အငျ်ဂလနျအသငျးသားဟောငျး စီနီယာတဈဦးဖွဈတဲ့ ဝိနျးဘဒဈကတော့ သူတို့နှဈယောကျထဲက တဈယောကျကိုရှေးရလြှငျ တိုကျစဈကို လိုကျပါအားကောငျးပွီး ခံစဈမှာလညျး ပွောစရာမလိုတဲ့ လုချရှောဟာ အငျ်ဂလနျအသငျးအတှကျ အသင့ျတောျဆုံးလို့ အငျတာဗြူးမှာ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။ ဝိနျးဘဒဈကတော့ ခြဲလျဆီး၊ မနျစီးတီးကဲ့သို့သော အသငျကွီးတှမှော ပါဝငျကစားဖူးတဲ့ ကစားသမားဟောငျးကွီးပါ။ မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ အငျ်ဂလနျနညျးပွ ဆောကျဂိတျရယ့ျ ဆုံးဖွတျခကြျသာ မူတညျပွီး ဘယျသူ့ကို ပှဲထှကျခှင့ျပေးသှားမလား စောင့ျကွည့ျရမှာဘဲဖွဈပါတယျ။
ယူနိုက်တက် ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ် နေတဲ့ ပြင်သစ်လိဂ်ချန်ပီယံ လူငယ်ကစားသမား